Izixhobo zophuhliso zeCadCorp - Geofumadas
Kwipostile yangaphambili esathetha ngayo zixhobo ze desktop yeCadCorp, kumzekelo ofanayo ESRI. Kule meko siza kuthetha malunga nezandiso okanye izisombululo ezongezelelweyo zophuhliso okanye ukwandiswa kwamandla.
Nangona ngale ndlela, ukuthelekiswa kwezi zixhobo akulula ukuchaza ubunyani kunye ne-ArcGIS Engine kunye ne-ArcIMS kuba umzekelo wezoqoqosho weCadCorp uyakhangeka kakhulu.
1 Izixhobo zoPhuhliso lwe-ActiveX
Iimodyuli zolawulo (CDM)
izixhobo zophuhliso ezingundoqo Cadcorp kufika nto kuthiwa ulawulo imódulos (CDM), kunye inceda ekubeni ezi kokubili ujongano lomsebenzisi njengoko abancedisi (oosiyazi) kunye interfaces umsebenzisi umsebenzisi enobuchule imephu logic. Ngoko ke uphuhliso kwikhithi Modeller, umzekelo, inojongano efana MapModeller kuphela program. Ezi zixhobo ziyimifanekiso (ayifani ngokufanayo) kwi-Intanethi ye-ArcGIS kunye ne-ArcSDE yeentsapho ze-ESRI.
Isixhobo seMephuViewer sinombutho wayo we-CDM Viewer
Isixhobo seMapManager sinomphathi wayo we-CDM
Isixhobo seMapModeller sinomlinganiselo wayo we-CDM Modeller
Inokuphuhliswa kusetyenziswa ubuchwepheshe be-ActiveX kunye neelwimi ezinjenge-Visual Basic, Delphi, C ++ kunye ne-PowerBuilder.
Ezi CDM zinomdla obunomdla kwaye ziyakwazi ukufumana ilayisenisi ngexesha (ixesha lokuqalisa), ukuze ufumane ilayisensi yeminyaka elilodwa, umzekelo, ukuvumela umqhubi ukuba athenge umkhiqizo kuphela ngexesha leprojekthi phuhlisa. Oku kwenza ukuba iindleko zithengise, nangona umgaqo "welayisenisi ngumprogram" uyinto engummangaliso, kungekhona ngePC.
Oku kunciphisa iindleko kwizicelo zenzelwe zokuthengiswa, njengoko abasebenzisi kufuneka nje ukuhlawula iindleko mvume sokusebenza (idla ixabiso kufutshane 40% yecandelo original).
2 Izixhobo zokuphuhliswa kwewebhu
Lo ngumsebenzi ovumela ukudala izicelo zokusebenza phantsi kweenkonzo zewebhu (iinkonzo zeWebhu), kunye nokudala idatha phantsi kwemigangatho yokusasazwa kwi-Intranet okanye kwi-intanethi.
I-MapBrowser iyimveliso yokusetyenziswa kwamahhala ekulawuleni iinkonzo zedatha phantsi kwe-OpenGIS imilinganiselo yelizwe, enye yeenzuzo ezinokuthi iCadCorp isekela i-OGC. Oku izicelo ndlela kuphuhliswa Umncedisi Imephu Web zombini (WMS) iimephu zokupapasha ojolise, Umncedisi Faka Web (WFS) transfer ojolise of geometries e GML iifomati / XML kunye Web Our Umncedisi (ee-WC); yonke inzuzo yokuba ngumgangatho osetyenziswayo ovulekileyo.
Esi sisisombululo esinamandla, xa kuthelekiswa nesimo sengqondo esivaliweyo se-ESRI phantsi kweemveliso ze-IMS / GIS Server.
ngaphambili eASC khona, okanye icandelwana iseva esebenzayo, le isisombululo abayeni kunye Cadcorp inika GeognoSIS.NET oluya ukusebenza yamanye amacandelo yophuhliso ukuphumeza izicelo kwi Intranethi okanye ukusetyenziswa Internet. Ukusebenzisa indawo yokuphuhlisa i-.NET okanye ezinye iilwimi ze-HTTP kunye ne-SOAP esekelwe kwi-Java enokuthi iqhutywe kumaseva amaninzi. Esi sixhobo sifana ne-ArcMs kwintsapho ye-ESRI.
Kukho izixhobo zokuguqulela iinkonzo ezenziwe phantsi kwe-ASC yangaphambili kwi GeognoSIS.
3 I-Case Development Development (EDK)
Le ipakethe yemveliso yophuhliso eyenza iifom ezimbini:
Iprogram yoPhuhliso lweZofthiwe (SDK), ekudalweni kwezicelo zeteknoloji ze-ActiveX
Intuthuko yeNtanethi (EDK), eququzelela ukuphuhliswa kwedatha yendawo ukuze ihanjiswe njengeenkonzo zewebhu (iinkonzo zewebhu) Esi sixhobo sinomfanekiso (ongenjalo ngokufanayo) kwi-ArcGIS Server kwiintsapho ze-ESRI.
Post edlulileyo«Edlulileyo Intsapho yeCadCorp yemveliso
Post Next Iimpendulo andinakukunikaOkulandelayo "